Onye na -emepụta ihe na onye na -ebubata ya Dongli
Resins Acation na -adịghị ike
Resins Nhazi matriks nke Polymer Ọdịdị Ụdị Ahụ ỌrụOtu Ionic Ụdị Mkpokọta ikike meq/ml na H Ọdịnaya Mmiri Akụkụ urughuru mm ỌzịzaH → Na Max. Mbupu ibu g/l
GC113 Gel ụdị Polyacrylic nwere DVB Kpochapụ Mpekere Ọdịdị R-COOH H 4.0 44-53% 0.3-1.2 45-65% 750
MMA113 DVB macroporous Polyacrylic Moist Opaque chaplet R-COOH H 4.2 45-52% 0.3-1.2 45-65% 750
D152 DVB macroporous Polyacrylic Moist Opaque chaplet R-COOH Na 2.0 60-70% 0.3-1.2 50-55% 770
Resin mgbanwe mgbanwe cation acid na -adịghị ike bụ ụdị resin nwere otu mgbanwe mgbanwe acid na -adịghị ike: carboxyl COOH, phosphate po2h2 na phenol.
A na -ejikarị ya na ọgwụgwọ mmiri, ikewapụ ihe ndị na -adịghị ahụkebe, ịkọwa okwu na ime ka mmiri dị nro, mmịpụta na nkewa nke ọgwụ nje na amino acid na ụlọ ọrụ ọgwụ.
(1) resin mgbanwe mgbanwe cation acid na -adịghị ike nwere njirimara yiri ya na mmiri. Ya mere, ike ya imebi nnu ndị na -anọpụ iche adịghị ike (ya bụ, ọ na -esiri ike ịza nnu nke anion acid siri ike dịka SO42 -, Cl -). Ọ nwere ike jiri nnu acid adịghị ike (nnu nwere alkalinity) mepụta acid adịghị ike kama acid siri ike. Enwere ike ịgwọ mmiri nwere alkalinity dị elu site na resin mgbanwe ụdị acid H adịghị ike. Mgbe ewepụrụ cations ndị kwekọrọ na alkalinity na mmiri kpamkpam, cations kwekọrọ na radical acid siri ike na mmiri nwere ike wepu ya site na resin mgbanwe ụdị acid H siri ike.
(2) N'ihi na resin mgbanwe mgbanwe cation acid na-adịghị ike nwere njikọ chiri anya maka H +, ọ dị mfe ịmụgharị, yabụ enwere ike weghachite ya na mmiri mkpofu nke resin mgbanwe c-ụdị acid siri ike.
(3) Ike mgbanwe nke resin mgbanwe mgbanwe cation acid adịghị ike karịa resin mgbanwe mgbanwe cation siri ike.
(4) resin mgbanwe cation acid na -adịghị ike nwere ogo njikọ njikọta na nnukwu pores, yabụ ike ya dị ala karịa nke resin mgbanwe cation acid siri ike.
Njirimara ndị ọzọ
Njirimara resin mgbanwe mgbanwe cation na -adịghị ike na mmiri yiri nke acid na -adịghị ike. O nwere mmekọrịta na -adịghị ike na nnu na -anọpụ iche (dịka SO42 -, Cl - na anions acid siri ike). Ọ nwere ike jiri nnu acid na -adịghị ike meghachi omume (nnu nwere alkalinity) wee mepụta acid adịghị ike mgbe mmeghachi omume gasịrị. Enwere ike ịgwọ mmiri nwere alkalinity dị elu site na resin mgbanwe iondị acid H siri ike. Mgbe ewepụrụ anion kwekọrọ na alkalinity na mmiri, anion kwekọrọ na radical acid siri ike nwere ike wepu ya site na resin mgbanwe H-ụdị acid siri ike.
Ebe ọ bụ na resin cation na-adịghị ike nwere mmekọrịta dị elu maka H, ​​ọ dị mfe ịmụgharị, yabụ enwere ike weghachite ya na mmiri mkpofu nke resin mgbanwe ụdị an-acid siri ike.
Ike mgbanwe nke resin cation na -adịghị ike bụ ihe dị ka okpukpu abụọ nke resin cation siri ike. Ebe ọ bụ na ogo njikọ nke resin cation na -adịghị ike dị ala, ike ọrụ ya dị ala karịa nke resin cation siri ike.
Ụdị nnu nnu na -adịghị ike resin cation nwere ikike hydrolysis.
Nke gara aga: Resin mgbanwe resion siri ike siri ike
Osote: Resin mgbanwe cation acid siri ike